Sein Lyan - စိ န် လျှံ: မမေ့အပ်သောဇူလိုင်(၁၉)
ဇူလိုင်လဆိုတာ မြန်မာပြက္ခဒိန် အရ မိုးတွေမှောင်မှောင် ရေဖောင်ဖောင် ဝါဆို ဝါခေါင်လထဲမှာပါ…. ဒီဇူလိုင်လ က ကျနော်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ နေချစ်ချစ်တောက် ပူပြင်း တောက်လောင်နေပေမယ့် ချစ်တဲ့ အမိမြေမှာ မိုးတွေ ဖွဲဖွဲရွာနေနိုင်သလို မိုးတွေ သဲသဲမဲမဲ လဲရွာနေနိုင်တယ်… ဇူလိုင်လမှာ မွေးတဲ့ ကျနော့်အတွက် ဒီအချိန် အိမ်ကိုလွမ်းပါတယ်… ရင်ထဲမှာ လွမ်းဆွတ် တမ်းတမိတာက ကျနော့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မွေးခဲ့တဲ့ အမေနဲ့ အဖေကို အရမ်းလွမ်းတယ်… အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိတဲ့ကျနော့် အဖို့ လွမ်းမဆုံးတဲ့ လတစ်လပါ...
ထူးခြားတဲ့ ဇူလိုင်လ ဆိုရအောင်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၄၇) ခုနှစ် ဒီလို ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့မနက်မှာ မိုးရေတွေကြား တစ်မျိုးသားလုံး ကိုယ်စား စီးမျောခဲ့ရတဲ့ သွေးချောင်းများကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး ရင်ထဲမှာ မခံမရပ် နိုင်ပဲ မျက်ရည်မိုးတွေနဲ့ အတူကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်… အဲဒီနေ့ကတော့ တမျိုးသားလုံး လုံးဝမေ့လို့မရတဲ့ (၁၉) ဇူလိုင် “အာဇာနည်နေ့” ပါ… အမိ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသစွာ အသက် သွေး ချွေး နဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး သွေးနဲ့ရေးခဲ့ ကြတဲ့ လွမ်းဆွတ် ကြေကွဲ စရာကောင်းတဲ့ ဒီလ ဒီရက် ဒီနေ့လေးကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး…။
ဒါကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို မိုးစက်တွေနဲ့ သက်သေပြုလို့ ဇူလိုင်လ(၁၉) ရက်နေ့ မှာ အသက်ပေးသွားကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည် ရဲဘော်ရဲဘက်များကို ဒီနေရာကနေ ဂါဝရတရားနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို လေးစားရိုသေစွာ အလေးပြု ရင်း ကဗျာလေးနဲ့ အတူ (၆၂) မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်….
ရင်ထဲက အပူကို တွေးပူကာ မလွမ်း
ရင် နင့် စို့ လို့
ဆို့ နင့် ကြေ ကွဲ
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၂) မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို အလေးပြုရင်း….
Writer Sein Lyan Time 1:50 am
တကယ့်ကို အနှစ်ရှိတဲ့ ကဗျာလေးပါ...
17 July 2009 at 02:09
ဘယ်တော့မှ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရ... မမေ့အပ်တဲ့ နေ့လေးကို အခုလို အမှတ်တရလေးပြုလိုက်ပေးတာကို အထူးလေးစား ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်....
17 July 2009 at 02:45
ဖိုးစိန်လုပ်မှပဲ Calendarမော့ကြည့်လိုက်ရတယ်.ဒီနေ့ဇူလိုင် ၁၉ များလားလို့..း)
လတ်တလောအခြေအနေ လာမဖတ်ဖူးလား.း))
17 July 2009 at 02:46
အာဇာနည် ၉ ဦးကို.
17 July 2009 at 04:13
မ​မေ့အပ်တဲ့့ ဒီအာဇာနည် ​နေ့၊ ​မေ့တဲ့ သူ​တွေ ​ မေ့ ​နေကြပြီ ...
ခုဆို အဲဒီ​နေ့မနက် ၁၀း၄၇ နာရီ အချိန် မှာ ...ဥဩဆွဲသံ ဆိတ်သုဉ်း ခဲ့ တာ ဘယ်​လောက် ကြာ ပြီလဲ ...
ဝမ်းနည်းစရာ ပါ . . .
မမေ့ပါဘူး။ အိမ်မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန် ချိတ်ထားတယ်း)
17 July 2009 at 04:36
17 July 2009 at 04:47
အာဇာနည်နေ့ ဒို့ မမေ့။
၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင်။
မမေံနိုင်တဲ့ နေ့လေးအတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်အတွက် ညီ့ကို ကျေးဇူးပါဗျာ။
ညီလဲ သား ဇာနည် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ လို့ အမြဲ ဆုတောင်းပေးလျက်
17 July 2009 at 05:26
ဆယ်ကိုးဇူလိုင်မမေ့နိုင် ဆိုသလိုပဲ ဒီဇူလိုင်လရောက်တိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကို ထာဝရ သတိရနေဆဲပါဗျာ.... ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး
ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားစွာ အလေးပြုသွားပါတယ်...။
17 July 2009 at 06:05
၁၉ ဇူလိုင်အမှတ်တရ ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အကိုရေ
အာဇာနည်တွေကိုလည်း အလေး ပြု ဦးညွှတ်ပါတယ် ..
17 July 2009 at 06:06
တကယ်ကိုလွမ်းလည်းလွမ်းသလို တမ်းလည်းအရမ်းတမ်းတနေမိတယ် အစ်ကိုေ၇...
17 July 2009 at 06:11
၁၉ ဂျူလိုင် ကိုသတိပေးနှိုးဆော်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ ကိုထောင်ရေ ဒါပေမဲ့ မေ့မနေပါဘူးလေ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ဗိုလ်ချုပ် အပါအ၀င် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လွပ်လပ်ရေး ကြိုးစားအားထုတ်မှု စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူး အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း လွပ်လပ်ရေးရဖို့ ဘယ်လိုတောင်းဆိုခဲ့ရကြောင်း သွားလာရေးခက်ခဲမှုတွေကြားက ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရကြောင်းတွေ ဖတ်ခဲ့ရတယ် လုံးဝလွပ်လပ်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးလို့လန်ဒန်က ပြန်လာပြီး ၆လလောက်ကြာတော့ လုပ်ကြံခံခဲ့ရတယ်နော် နောက်၆လ ကြာတော့ လွပ်လပ်ရေးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရသာ ကိုတောင်ခံစားမသွားရရှာဘူး တွေးလေလေ စိတ်မကောင်းဖြစ်လေပဲ ကိုထောင်ရယ်...........ဂျူလိုင်၁၉ မမေ့ဘူးနော် .....အလေးပြုပါတယ်
17 July 2009 at 06:37
အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရတော့တဲ့၊ မမေ့သင့်တဲ့နေပါ။ ကိုဖိုးစိန် လည်းအာဇာနည်နေ့ကို မမေ့တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
17 July 2009 at 06:47
ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တမျိုးပဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒီရက်ပိုင်း အာဇာနည်နေ့ရောက်တော့မယ်လို့ စိတ်က သတိရနေတာ၊ post လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
So my brother Phoe Sein,
Good post for all, by the way
you should remember me too..... together with this post :)
19th July is my Big Day too...... :lol
** PS, computer formatted and can't write in Burmese now. Don't know how to do till then :(
17 July 2009 at 09:22
အင်း အဲ့နေ့ကတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ရက်ပါဘူး။ ဘွားဘွားပြန်ပြောပြလို့ သိရတာကတော့ အဲ့နေ့ကတဲ့ မိုးတွေကဖွဲဖွဲကျပီး အုပ်ဆိုင်းနေတာပဲတဲ့ ဖွားဖွားပြော တုန်းက မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်မိတယ်။ အခုလို သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
17 July 2009 at 10:49
စိန်.. အလေးလာပြုတယ်.. ကဗျာလေးလဲ သေချာဖတ်သွားတယ်နော်
သိပ်မလွမ်းပါနဲ့ကွာ.. အလုပ်တွေပင်ပန်းတာနဲ့ အိပ်ပျက်တာနဲ့...
17 July 2009 at 12:12
ဇူလိုင်(၁၉)ကိုတော့ မမေ့သင့်တာ အမှန်ပါပဲ။ မမေ့သင့် မမေ့ထိုက်တဲ့ နေ့လေးမို့ လာရောက်အလေးပြုပါတယ်။
ဗိုလ်ချူပ်နဲ့တကွ ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်ကြီးများအား
ပြူအလေး လိုက်ပါတယ် အဲလေ အလေးပြုလိုက်ပါတယ်လို...
17 July 2009 at 16:38
နေ့ထူးနေ့မြတ်မရောက်ခင် အခုလို ပို့စ်လေးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုဖိုးစိန်ရေ..။ မေ့နေတဲ့သူတွေလည်း ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေတာပေါ့ဗျာ..။ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုဖိုးစိန်။
17 July 2009 at 17:30
ကျရှုံးလေပြီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေးပြု
ကဗျာကောင်းလေးအတွက် ဖတ်ရတာ ကျေးဇူး
17 July 2009 at 18:20
Martyr’s Day မှာ အာဇာနည်အားလုံးများကို salute ပြုသွားပါတယ်...
17 July 2009 at 18:29
ဖိုးစိန် က ဝီရိယ ကောင်းတယ်..
အားလုံးနဲ့ တူတူ အလေး ပြုသွားပါတယ်..
ဝင် join သွားတယ်။
18 July 2009 at 02:12
18 July 2009 at 18:12
ကိုဖိုးစိန်ရေ..... အားလုံးနဲ့ အတူ အလေးပြုသွားပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးကို ခံစားသွားပါတယ်လို့ ။
19 July 2009 at 06:09
ကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကို လာရောက်အလေးပြု ဂါရ၀ပြုပါတယ်...............
19 July 2009 at 06:19
အာဇာနည်နေ့အတွက် ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ရပြန်ပေါ့ ကိုဂျီးစိန်... =)
19 July 2009 at 07:25
ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင် မမေ့အပ်ပဲ အမှတ်ရနေမယ့် နေ့ တစ်နေ့မှာ ..
အမှတ်တရ သတိရနေမိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီ ရောက်လာခဲ့တယ် ..
မွေးနေ့လည်း နီးပြီ ..
နေဒေးသစ်ကို နောက်ဆုံး စာလုံး တစ်လုံးလောက် ဖြစ်ဖြစ် သတိရနေသေးတယ် ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ် ..
ရခဲ့တဲ့ ဆု စူးခဲ့တဲ့ စိတ် ဒဏ်ရာ
အင်္ဂါသားရဲ့ဝါသနာ အိပ်မက် ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ
ပေါက်ဖော် နဲ့ ဟောက်ဖော်